Kahadalka Nolosha, Kaniisada Dunida ee Switzerland (WKG)
Saynisyahannada bulshada ayaa adeegsada ereyo xiiso leh si ay u sharxaan waqtiga aan ku nool nahay. Waxaad u badan tahay inaad maqashay ereyada "premodern", "casri" ama "gadaal". Runtii, qaar baa u yeera waqtiga aan ku noolahay adduunyada dambe. Saynisyahannada bulshada ayaa waliba soo bandhigaya farsamooyin kala duwan oo loogu talagalay isgaadhsiinta wax ku oolka ah jiil kasta, ha ahaadee "dhise", "boomer", "basters", "X-ers", "Y-ers", "Z-ers" ama "muusiki".
Laakiin iyadoo aan loo eegayn adduunka aan ku nool nahay, dhab ...
Inta badan dadka ka weyn 50 sano waxay xasuusan doonaan Nikita Khrushchev. Wuxuu ahaa nin midab leh, dabeecad duufaantana leh, oo hogaamiya u ahaa Midowgii Soofiyeeti hore, oo kabihiisa ku garaacay goobta uu ku hadlayey Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Waxaa sidoo kale lagu yaqaanay sharraxaaddiisa in qofkii ugu horreeyay ee meel bannaanka jooga ah, cosmonaut Ruush-ka Yuri Gagarin "uu duulay laakiin ma jiro ilaah halkaas jooga". Marka laga hadlayo Gagarin laftiisa, ma jiro wax diiwaangelin ah oo uu ku sheegay inuu waligiis sidan oo kale sameeyo. Laakiin ...